Okulula Engakwenza Jabulela DVD Movie Samsung Galaxy S4
Lapho sakwazi a Samsung Galaxy S4, Ngicabanga ukuthi kufanele aphefumulelwe ngokuqhubeka-5.0 intshi 1080P zokuthinta isikrini & 2600mah ibhetri. With the 13 MP bakhulise ikhamera bese kwakhiwe-in 16G/32G isitoreji, Samsung Galaxy S4 iyi-media isikhungo enamandla. Ungayisebenzisa it ukudubula izithombe ezehlukene & imiqophi, ajabulele noma yimaphi amabhayisikobho Blu-ray/DVD kuphi. Uma ufuna ukubeka intandokazi DVD movie yakho Galaxy S4, Ngicabanga wena oyodumazeka kangaka kukho. Ngoba akakwazi ukudlala DVD disc noma amafolda ngqo.
Kodwa manje, udinga Ungakhathazeki ngakho. Lo mhlahlandlela uya ukuba ukuxazulula inkinga yakho. Yini okufanele uyenze baguqula nje DVD disc kuya video for Galaxy S4 nge Wondershare Isiqophi Converter Ultimate. Ngaphambi Umhlahlandlela isiqalo egcwele, ake enze amalungiselelo athile.
1. Galaxy S4 osekelwa video format: MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263
2. DVD movie: intandokazi DVD movie yakho, kungakhathaliseki DVD disc, DVD ifolda noma DVD ISO ifayela lesithombe
3. Isiqophi Converter Ultimate: A enamandla video Converter kuhlanganiswe yonke izici ukuguqulwa, ezifana ividiyo & DVD nokuguquka, video ukuhlela, esivuthayo, web video thwebula nokunye.
Download Imiqophi Converter Ultimate bese uyifake
Indlela ukuguqula DVD movie ku-Galaxy S4 nge 3 izinyathelo?
Step 1, ukungenisa umthombo DVD kulo hlelo
Faka DVD yakho disc zibe computer, futhi qalisa Imiqophi Converter Ultimate. Chofoza le “Umthwalo DVD” inkinobho ukuqala ukulayisha amafayela. Ungakwazi futhi ukuguqula ekhaya DVD ngaphandle disc, ngekusebentisa amafayela ISO, noma DVD Ifolda.
Step 2, Khetha ifomethi Isiqophi njengenhlangano format okukhipha
Chofoza lokukhipha Ifomethi bese ukhetha format ofuna ohlwini olukumabhekezansi. Chofoza bese ukhetha Galaxy S4 njengoba okukhipha ividiyo format.
Step 3, Rip DVD movie ku-Galaxy S4
Isinyathelo wokugcina ngokuchofoza nje inkinobho "guqula" ukuguqula DVD movie kuya MP4 video format. Manje, ungaba ukuphumula bese ulinda ukuguqulwa liyaphela. Emva ukuguqulwa sesiphelile, ungakwazi ukuxhuma Galaxy yakho S4 nge computer, futhi adlulisele movie ibe kukho ajabule.
Posted on March 4, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba Isixazululo Blu-ray/DVDAmathegi ukuguqula DVD ukuze galaxy S4, DVD ukuze galaxy S4, rip DVD ukuze galaxy S4, ukudlulisela DVD ukuze galaxy S4
Langaphambilini post Previous: Nendlela Jabulela DVD movie ne Samsung Galaxy Note 8.0
Next post Next: Indlela ukuze alulame idatha elahlekile esuka Western Digital Passport My?